सिक्किमको जाडोमा बोल्ड प्रियंका के गर्दै ? «
सिक्किमको जाडोमा बोल्ड प्रियंका के गर्दै ?
प्रकाशित मिति : २८ माघ २०७५, सोमबार १३:०७
चलचित्र ‘हजार जुनी सम्म’को २ वटा गीतमा नायक आर्यन सिग्देल र नायिका प्रियंका कार्कीको जोडी देखिने भएको छ । सिक्किममा माइनस ४ डिग्रीमा नायिका कार्कीले आफूलाई बोल्ड अवतारमा प्रस्तुत गरेकी छिन् । आर्यनसँगको रोमान्समा प्रियंकाले जाडोको समेत प्रवाहा गरिनन् । विकासराज आचार्यको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्रको छायांकन पनि सकिएको छ । ५८ दिन लगाएर चलचित्र खिचिएको निर्माणपक्षले बताएको छ ।
चलचित्रलाई आउँदो बर्षको भदौमा रिलिज गर्ने तयारी गरिएको छ ।